एनसेलको डेटा र एसएमएस सेवा अब लोनमा पाइने – EST Nepal
मास्क नलगाइ घर बाहिर निस्कनुभयो ? प्रहरीले समाउला
नेकपा नेतृत्वलाई युवा र विद्यार्थीले भने ‘पार्टी एकता कायम राख’
लकडाउनमा ११०५ आत्महत्या, मान्छेले आफ्नो ज्यान आफैँ किन लिन्छ ?
इन्स्टाग्राममा दश लाख फलोअर्स पाइन नायिका प्रियंकाले
नेकपामा सत्ता संघर्ष : गुट फुटको भारी एक अर्कोलाई बोकाउने कसरतमा
नेकपा नेतृत्वलाई प्रदेश १ को आग्रह ‘पार्टीलाई गम्भिर क्षति हुनबाट रोक’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा आफ्नै मन्त्रीलाई कित्ता क्लियर गर्न निर्देशन, दिए यस्ता चार सन्देश
estnepal ३० चैत्र २०७६, आईतवार ०८:५०
काठमाडौं । एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले अब आफुसँग मेन ब्यालेन्स नभएपनि डेटा र एसएमएस सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् । नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा एनसेल प्राइभेटले आफनाग्राहकलार्ई सम्पर्कमा रहिरहनथप मद्दत पुर्याउँदै शनिबार (चैत्र २९) बाट नयाँ योजना ल्याएको छ । जसअन्तर्गत ग्राहकले अब डेटा र एसएमएस् सेवा सहितको प्याक वा एसएमएस प्याक पछि शुल्कतिर्ने गरी खरिद गर्न सक्छन् ।
कोरोना भाइरसले फैलिएसँगै लकडाउनले गर्दा ग्राहकहरुले सहज रुपमा आफ्ना परिवारका सदस्य र साथीभाइसँग सम्पर्कमा रहन तथा नववर्षको शुभकामना आदानप्रदान गर्न व्यालेन्स रिचार्जमा कठिनाई भोगिरहेका हुन सक्छन् । त्यसैले एनसेलले सजिलै डेटा र एसएमएस सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न यो नयाँ योजना ‘न्यु इयर अफर’ ल्याएको हो ।
यस अफर अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले २५० एमबी डेटा र २५० एसएमएस प्याक कर सहितमात्र २० रुपैयाँमा सुचारु गर्न सक्छन् । ग्राहकले आफुसँगशुन्यब्यालेन्स रहेको अवस्थामापनि यो प्याकलोनमा सुचारु गरी डेटा र एसएमएस सेवाको फाइदालिन सक्छन् । यो प्याकअन्तर्गत पाइने डेटा र एसएमएस भोलुम सुचारु भएको दिन देखि ५ दिनको लागिमान्य रहन्छ ।
लोनमा नै २५० वटा एसएमएस रहेको प्याक कर सहितमात्र १० रुपैयाँ सुचारु गर्न सक्छन् । सुचारु गरिएको एसएमएस प्याक ५ दिनको लागिमान्य रहनेछ । ग्राहकले एस्ट्रिक्स ९९८८ एस्ट्रिक्स ७७ ह्यास डायल गरी आफ्नो आवश्यकताअनुसार डेटा र एसएमएस बन्डल प्याकवाएसएमएस प्याकलोनमा सुचारु गर्न सक्छन् ।
विगत दुई महिना देखि एनसेलको सिम प्रयोग गरिरहेका र मेन ब्यालेन्स ५ रुपैयाँ भन्दा कम भएका एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले प्याकहरु सुचारु गर्न सक्छन् । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कुनै पनि समयमा जति पटक पनि यो सेवालिन सक्छन् । यद्यपि सेवा सुचारु गर्नुभन्दा पहिला पुरानो लोनको रकमचुक्ता गरेको हुनु पर्ने जनाएको छ ।
विराटनगरमा घरधनीको शव घरभित्रै गाडेको अवस्थामा फेला परेपछि…
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १९:२२
२२ असार २०७७, सोमबार ०७:५०
प्रदेश १ सरकारको बजेट ४० अर्ब ८९ करोड (पुर्ण पाठसहित)
१ असार २०७७, सोमबार १७:५५
चारआली–सिलिगुडी पेट्रोलिय पाइपलाइन ओछ्याउन करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने
प्रदेश १ मा कोरोना : ३१ सङ्क्रमित, करिब ६ हजारको परीक्षण
कोरोना जितेकाको कुरा ‘आत्मबलले उडायो कोरोना’
दमकमा आजदेखि स्वाब सङ्कलन
मुख्य समाचार 784